Daraasada gemology - Koorsada Gemology - Cusbooneysiin cusub oo la heli karo 2021
NEW : Daraasad cilmi-baaris oo internetka ah
Sababtoo ah dalab ballaaran oo ka yimid ardaydeena aan safri karin tan iyo Maarso 2020, hadda waa suurtagal in wax lagu barto khadka tooska ah.
Waxaan u adeegsanaa barnaamijyo kaladuwan oo wax lagu barto nidaamka kamaradaha badan: Zoom, Skype, WeChat, WhatsApp… Waxaan u isticmaali karnaa barnaamij kasta oo kale barnaamijyadaada sida aad u jeceshahay.
Waa maxay xannuunka kaadi-mareenka?
Waxaan ku barnaa gemology af Ingiriis ama Faransiis
Sintetik & daaweyn
Qiimaha & Qiimeynta
Gemology waa sayniska alaabada jawharad, iyo qayb gaar ah oo ka mid ah laanta duugga ah ee cilmiga macdanta sayniska. Daraasadda gemology waxay daboolaysaa dhammaan dhinacyada farsamada ee dhagxaanta dhagxaanta iyo qalabka jawharad.
Waxyaabahooda kiimikada, muuqaalka jirka iyo indhaha, farsamooyinka loo isticmaalo soo saarista ku dayashada jawharada iyo isku-dhafka, goynta iyo nadiifinta dhagaxyada, iyo tan ugu muhiimsan hababka koorsooyinka gemology iyo aaladaha ka shaqeeya aqoonsiga, qiimeynta iyo qiimeynta dhagaxyada.
Ereyga 'gem material' wuxuu daboolayaa fursado aad u fara badan. Inta badan qalabka jawharadu waa macdan, laakiin 3000 ama wax la mid ah, macdano uu yaqaanno bini-aadamku, kaliya 70 qoys / 500 dhagax ayaa loo tixgeliyaa inay leeyihiin sifooyin loo aaneeyey qaybtaas gaarka ah ee loo yaqaan dhagaxyada.
Hordhac ah dhagxaanta waaweyn ee dhagaxaanta sida caadiga ah laga helo suuqa. Koorsadan bilowga ah, horusocodka ah ama heerka khibradeed ah waxay culeys saareysaa dhinacyada muhiimka ah ee jawharadyada noocaas ah.
Qofka 1: 400 $
2 Qofka 4: 240 $ / qofkiiba
5 qof +: 200 $ / qofkiiba
* Qiimayaashu waxay la xiriiraan oo keliya tirada qof ee ka ballansan kara ballantaada * Booqashada ugu yaraan usbuucyada 2 kahor Fadlan nala soo xiriir ballansashada.
Sidee loogu dhici waayaa dabinka kuwa gemstones iibiya? Sidee loo aqoonsan karaa dhagaxyada dabiiciga ah, isku-darka, daaweynta? Sidee loo qiyaasaa tayada iyo qiimeynta? Waxaad ka heli doontaa jawaabo dhammaan su'aalahaaga inta lagu jiro fasalka
Barnaamijka fasalka waxaa ku jira:
Dhacdooyinka muraayadda indhaha
Dhalada Dhalada / Dhaawaca Jabka / Bogsashada Dheecaanka
Ka tag fasalka si aad u faham faham ah halka ay dhagaxyadu ka soo baxeen iyo sida si guul leh loogu aqoonsado wajiyadahooda kala duwan.
BARNAAMIJ Dr. Dr. MOHAMED MOHAMED TOLBA SAID ayaa soo gabagabeeyey koorsadii tababarka ee cilmiga gemology. 1 maalin (6 saacadood) “15-kii april 2015 waxaan ku qaatay maalin aad u xiiso badan oo xiiso badan barashada koorsada degdegga ah ee gemolojiga ee Machadka Gemological ee Cambodia, Mudane Jean-Philippe wuxuu ahaa macalinkaygii 6 saacadood ee aan wax baranayay, Isagu waa xirfadle cilmiga gemology. Waxaan u maleynayaa in Mac-hadka Cilmi-baarista ee Kambodiya uu yahay meesha saxda ah ee laga heli karo aqoon dheeri ah oo ku saabsan gemology iyo dhagaxyada.
Mudane SERGIO (oo u dhashay dalka Talyaaniga) iyo Marwo WIRIYA (oo ka timid Thailand) ayaa soo gabagabeeyey koorsadii tababarka ee cilmiga gemology. Maalin badh (3 saacadood) “Philippe il proprietario è una persona molto competente e professionale nel campo della gemmologia, noi abbiamo fatto un corso di mezza giornata in cui ci ha introdotto nel mondo delle gemme.ha una showroom notevole di gemme autentiche cambogiane e non… insomma se volete comprera e zaffiri veri birmani recatevi da Philippe è il n ° 1 a Siem goosashada. Inoltre se volte ”- Meey 5, 2015
Mudane CARL (oo ka yimid England) iyo Ms. AGYNESS (oo ka yimid Shiinaha) ayaa soo gabagabeeyey koorsada tababarka ee cilmiga gemology. 1 maalin (6 saacadood) 30-Luulyo, 2015
Mr. Toh Hock An (oo reer Taiwan ah) ayaa dhammeystey koorsada tababarka cilmiga gemology. Maalin badh (3 saacadood) Ogast 15, 2015
Master Hanz của (laga bilaabo Filibiin) wuxuu dhammeeyey koorsada tababarka cilmiga gemology. Maalin badh (3 saacadood) Oktoobar 15, 2015
Ms. Ramya Ponnada & Mr. Krishna Kanth Ponnada (oo ka yimid Hindiya) ayaa dhammeystey koorsada tababarka cilmiga gemology. Maalin badh (3 saacadood) Nofeembar 12, 2015
Mr. Sonny Rodriguez & Ms. Tiffany Rodriguez (oo ka yimid Filibiin) waxay dhammeeyeen koorsada tababarka cilmiga gemology. Maalin badh (3 saacadood)"Haddii aad u baahan tahay dhagaxyo jawharad dammaanad leh, halkan ka gal" - Waxaan raadinayey jawaabo la xiriira dhagxaanta qaaliga ah ee lagu iibiyey suuqii hore, meeshanna waxay i siisay dhammaan warbixinnadii aan u baahnaa si aan u ogaado gaar ahaanshaheeda. Sida muuqata dukaamada jawharada badankood ee suuqa waxay kaa iibin doonaan kuwa been abuur ah.
Waxaan iska qorey aqoon isweydaarsi 3hour ah waxaana hubaal ah inuu ballaarinayo aqoontayda ku saabsan dhagaxaanta dhagaxyada. Waxay i siiyeen shahaadada ka dib runtiina waxay ahayd 3hours u qalma. Mudane Jean runtii aad buu ujecelyahay dhagxaanta. Hubi hubi boggooda internetka, la xiriir iyaga oo waxay ku heli doonaan tuk-tuk oo kaa qaada hudheelkaaga. Sikastaba xaalku ha ahaadee inaadan xiiseyneyn inaad barato jawharad kaliya booqo oo arag dhagxaanta dhagaxda leh ee uu sida fudud diyaar ugu yahay iibka - Nofeembar 12, 2015
Mudane Thorstein iyo Mr. Widar (oo reer Norwey ah) ayaa dhameystay koorsada tababarka ee cilmiga gemology. Maalin badh (3 saacadood) Nofeembar 16, 2015
Tom iyo Kristin (oo ka yimid USA) & Norma iyo Trevor (oo ka yimid Canada) ayaa dhammeystey koorsada tababarka cilmiga gemology. November 22, 2015
Konstantin iyo Silviya (oo ka socda Bulgaria). November 28, 2015
Miles, July, Rosie, Tilly & Celeste (oo reer England ah). December 22, 2015
Ms. Lee Hui Yun (oo ka timid Singapore). December 23, 2015
Annick & Maxim (oo reer Australia ah). December 28, 2015
Jasmine, Bruce & Allan (reer Filibiin). December 29, 2015
Marc & Lani, Waxay ka yimaadeen Los Angeles, California, USA January 10, 2016
Ms. Ruth, ka Indonesia January 12, 2016
Mr. Jeff, ka USA January 13, 2016
Joshua & Michael, oo ka yimid USA January 20, 2016
Stephanie & Mason, oo ka yimid Hong Kong January 21, 2016
Gary, Diane & Barb, oo ka yimid USA January 21, 2016
Anna & Diana, oo ka yimid Ruushka February 4, 2016
Sok heng, Pui San, Chiew Sum & Sing Kwan, oo ka yimid Malaysia "Booqasho cabsi leh - xiiso iyo indho furan" - Meel fiican oo la booqdo! Waxaan qaadanay casharkii 1-da saacadood ahaa, oo aakhirkii inyar ka yara dheeraaday sababo laxiriira aqoonta badan ee uu la wadaagayay Jean. Jean wuxuu aad ugu fiicnaa sharaxaada kaliya noocyada kala duwan ee dhagaxaanta, laakiin sidoo kale wuxuu ku fiicnaaday u soo qaadashada nolosha macnaha guud ee Kamboodiya iyo waliba sheekooyin aad u qabow. Sidoo kale banaanbaxyo aad u weyn oo ka dhaca shaybaarka oo runtii aad ka arki karto noocyo kala gedisan oo dhagaxyo ah iskuna day inaad ogaato midka dhabta ah, la daweeyay ama la sameeyay! Waxa kale oo jira xulasho weyn oo ah GEMS-ka maxaliga ah ee lagu iibsado qiimo aad u macquul ah casharka kadib. Wax badan bartay, baashaal badan oo ka tagay jawharad wanaagsan oo Kamboodiya ah iyo qadarin cusub oo laga helay gemology! - Febraayo 5, 2016
Nikolas, Christodoulos & Despoina, oo ka yimid Griiga February 7, 2016
Ms. Katherine, ka Spain, ayaa dhameystirtay tababar ee gemology. February 10, 2016
Naho, oo ka socota Japan & William, oo ka socda Boqortooyada Ingiriiska, ayaa dhammaystay koorsada tababarka cilmiga gemology. February 15, 2016
Philip, ka England, ayaa dhameystirtay tababar ee gemology. February 19, 2016
Knud-Erik, Dorte & Dorthe, oo reer Denmark ah, ayaa dhammeystey koorsada tababarka ee cilmiga gemology. February 20, 2016
Ms. Jerica, ka USA, ayaa dhameystirtay tababar ee gemology. March 4, 2016
Ms. Lena, ka Ukraine, ayaa dhameystirtay tababar ee gemology. Waxaan booqday machadka si aan waxbadan uga ogaado dhagxaanta Kamboodiya. Waa inaan idhaahdaa meeshan sifiican ayaa loogu qabtay dhamaan - martida, hagayaasha, xirfadlayaasha, iibsadayaasha. Halkan waxaad ka arki kartaa oo 'khibrad' ka heleysaa dhammaan dhagaxyada adduunka. Xogtu way cadahay, jawigu waa cajiib. Waxaan jeclaan lahaa inaan ugu mahadceliyo Philippe cashar fiican - Maarso 14, 2016
Javier & Andrea, oo reer England ah, ayaa dhameystiray tababarkii ku saabsanaa cilmiga gemology. March 24, 2016
Tanya, Sebastian & Scott, ayaa dhameystirtay koorsada tababarka cilmiga gemology. Waxaan u kaxeynay wiilkeena 8 jirka ah koorso hal saac ah maadaama uu aad u xiiseynayay dhagaxyada, dhagaxyada iyo kiristaalo. Jeanne-Pierre waxay qaadatay in kabadan saacada loo qoondeeyay waxayna ahayd mid aqoon iyo xamaasad badan kuleh maadada gemmology. Wiilkeennu wuxuu si fiican ugu riyaaqay koorsada, sidaan annaguba u xiiseynay, gaar ahaan fadhiga shaybaarka, aqoonsashada guntimaha kala duwan ee mikroskoobka. Wuxuu ku farxay inuu la baxo shahaado iyo sidoo kale dhagax Praseolite. Mahadsanid. - Maarso 29, 2016
Sangita & Daniel, oo reer England ah, ayaa dhameystiray tababarkii ku saabsanaa cilmiga gemology April 3, 2016
Hilary & Ian, oo reer Australia ah, ayaa dhammaystay koorsada tababarka cilmiga dhirta. April 4, 2016
Maria & Joanna, oo ka yimid Filibiin, waxay dhameysteen koorsada gemology ee cilmiga gemology. Koorsada maalinta nuskeed ku qaadatay machadka gemological. Waxay ahayd mid Xog badan! Koorsadan kadib, waxaan hubaal 100% kalsooni dheeraad ah ka qabnaa qiimeynta dhagaxaanta. - Abriil 8, 2016
O'Malley Qoyska, oo ka yimid USA, ka dib koorsada tababarka ee Gemology. April 14, 2016
Silvester & Silvia, oo reer Australia ah, ayaa dhamaystay tababarkii ku saabsanaa cilmiga gemology. Waxaa laga yaabaa 12, 2016
Ms. Akemi, ka Japan, ayaa dhameystirtay tababar ee gemology. Waxaa laga yaabaa 15, 2016
Julius, Marieflor, Sandrine, Coleen & Cedric, oo u dhashay dalka Filibiin, ayaa dhameystiray tababarkii ku saabsanaa cilmiga gemology. Waxaa laga yaabaa 29, 2016
Ma. Luz, oo ka yimid Filibiin, & Gordon, oo ka socda Boqortooyada Ingiriiska, ayaa dhammaystiray koorsada gemology ee cilmiga gemology. Waxaa laga yaabaa 31, 2016
Katie, Edwardo, Jennifer, & Jeffrey, oo ka yimid USA, ayaa dhameystay koorsada tababarka cilmiga gemology. June 16, 2016
Jamie & Ellie, oo ka yimid USA, ayaa dhammeystey koorsada tababarka cilmiga gemology. July 18, 2016
Pauline & Ronan, oo reer France ah, ayaa soo gaba gabeeyay tababarkii ku saabsanaa cilmiga gemology. August 1, 2016
Sue, Maureen & Bruce, oo ka yimid USA, ayaa dhammeystey koorsada tababarka cilmiga gemology. August 11, 2016
Anne & Olivier, oo reer France ah, ayaa dhameystiray koorsada gemology ee cilmiga gemology. August 18, 2016
Max & Hester, oo ka socda USA, ayaa dhammaystay koorsada tababarka cilmiga gemology. August 19, 2016
Carrie & Martijn, oo reer Australia ah, ayaa dhammaystay koorsada tababarka cilmiga gemology. August 20, 2016
Katherine, ka Australia, ayaa dhameystirtay tababar ee gemology. Sebtember 8, 2016
Allesha & Ross, oo ka yimid USA, ayaa dhammaystiray koorsada gemology ee gemology. Sebtember 10, 2016
Mr.Thiery, ka France, ayaa si rasmi ah tababar hal toddobaad (30 saacadood) ee gemology ah. Sebtember 26-30, 2016
Ali & Joe, waxay dhameysteen koorsada tababarka cilmiga gemology. October 20, 2016
Lenny, ardayga noogu yaru, ka France, ayaa dhameystirtay tababar ee gemology. October 21, 2016
Steven & Jene, oo ka socda USA, ayaa dhammeystey koorsada tababarka cilmiga gemology. December 5, 2016
Fiona & Shah, oo reer England ah, ayaa dhameystiray koorsada gemology ee cilmiga gemology. December 9, 2016
Aislinn & Dominique, oo ka yimid Hong Kong.December 12, 2016
Fadlan nala soo xiriir ballansashada.